Taliyaha ciidanka maamulka Jubbaland General Aadan Koojaar ayaa sheegay in ay ku raadjoogaan firxadkii al-Shabaab ee dhowaan laga qabsaday jasiiradda Kudhaa oo 150 km dhinaca koonfur uga beegan magaalada Kismaayo.
Maleeshiyadii al-Shabaab ee ku sugnayd deegaanka Kudhaa ayaa xilli habeennimo ah ka baxsaday jasiiradda kaddib markii duqaymo cirka ah loo geystay saldhigyadii ay ku lahaayeen deegaankaas. Intaa kadib ayay ciidamada maamulka Jubbaland oo kaashanaya kuwa Midowga Afrika ee AMISOM gudaha u galeen, lana wareegeen gacan ku haynta degaankaas.
Shabaabka arxanka daran oo Baydhabo wariye iyo xaaskiisa ku dilay
Kooxda al-Shabaab oo lagu yaqaan xadgudubyada bani’aadannimada ka baxsan iyo ugaarsiga culumada, indheergaradka, dhaqaatiirta, macallimiinta iyo xirfadleyda kale ee Soomaaliyeed ayaa saddex qof oo biri mageydo ah ku dishay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Saddexda qof ee la dilay ayaa ka kooban wariye Daa’uud Cali Cumar oo ka hawlgalayay idaacadda Baydhabo ee magaaladaas, xaaskiisii iyo nin ay qaraabo yihiin oo kamid ahaa indheergaratada magaalada. Dadka degaanka ayaa xaqiijiyay in wariyaha iyo xaaskiisa loogu dhacay gurigooda, laguna dilay, halka ninka kalena lagu dilay xaafad kale.
Shabaabka Buuraha Galgala jooga oo ku dhawaaqay in ay ISIS ku biireen
Madaxda kooxda al-Shabaab ee fadhigoodu yahay Buuraha Galgala ee maamul-goboleedka Puntland ayaa ku dhawaaq in kooxdiisu ay ku biirtay ISIS, arrinkaas oo la filayo in uu ka sii diro khilaafkii waayan Shabaabka dhexdooda ka aloosnaa.
Farriin kooban oo uu cajalad ku soo duubay ayuu Sheekh Cabdulqaadir Muumin ku sheegay in isaga iyo maleeshiyadiisuba ay si rasmi ah ugu biireen ISIS, hadda waxii ka dambeeyana ay amarka ka qaadanayaan hoggaamiyaha ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi oo xaruntiisu tahay magaalada Raqqa ee wadanka Siiriya.
Dagaal lagu hoobtay oo dhexmaray kooxo ka wada tirsan al-Shabaab
Mudaaharaad looga soo horjeedo al-Shabaab oo ka dhacay xeebta Liido